Nin Gowracay Naag Qaad wale ah isla markaana tagay Saldhiga si loo xiro
Wararka laga helaayo magaalada Hargeysa ee Maamulka Somaliand ayaa sheegaayo in nin uu ku kacay fal aad looga naxay kadib markii uu gowracay naag Qaad Wale ah oo iibisa Qaad,ninka falkaan geystay ayaa wuxuu watay mindi kadibna naagti qaadka iibineysay ayuu xalay abaara 9 fiidnimo ku qalay suuqa qaadka ee magaalada Hargeysa ee Maamulka Somlialand.
Ninka gacan ku dhiiglaha ah ee falkaan foosha xun geystay ayaa la sheegay inuu yahay dadka laga tira badan yahay ee loo yaqaan Tumaasha, ninka ayaa magacaabaa Siciid Muxumed (ina Cirro weyne) waana nin si weyna looga yaqaano magaalada Hargeysa.
Naagta la gowracay ayaa waxaa lagu magacaabaa Ardo Muumin waxaana arintaasi ay ka dambeysay kadib naagta ay aflagaado u geysatay Xisbi uu ninka gacan ku dhiiglaha ah taageersanaa oo laga awood roonaaday.
Gacan ku dhiigle ina Cirro weyne ayaa waxamindida uu watay kaga dhaawacay Ardo qoorta iyo caloosha, waxaana soo gaaray Ardo dhaawc culus oo markii danbe loola cararay cusbitaalka Magaalada Hargeysa.
Ninka Falka geystay ayaa si toos ah u tagay Saldhiga Booliska halka laga filaayay inuu baxsado waxa uuna tagay saldhiga Booliska Ciidamada Somaliland ee Hargeysa isagoo wata mindidii uu falka ku gesytay islamarkaana sheegay in fal dambi ah uu galay in la xirana is amray.
Ciidamada Booliska Saldhiga Hargeysa ayaa xabsiga utaxaabay Siciid Muxumed oo ah ninkii falka geystay waxaana iminka socda baaritaano lagu hayo caafimaad ahaan sida maskaxiyan uu yahay ninkaasi.
Dadka ku dhaqan Magaalada Hargeysa ayaa waxay hadal hayaan dhacdadii xalay ka dhacday bartamaha magaalada Hargeysa ee ninka uu ku gawracay haweyneyda qaadka iibineysay inkastoo haweyneydaasi geeriyoon hayeeshee dhaawac culus iminka ujiifta cusbitaalka Hargeysa.